प्रश्न: बोसो प्रत्यारोपण भनेको के हो? यो कस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ अनि कति सुरक्षित छ होला ? - एस कोइराला
उत्तर : सुन्दर बन्न मानिसहरु विभिन्न उपाय अपनाउछन्। कसैले सौन्दर्य प्रशाधनको प्रयोग गर्छन् भने कसैले कस्मेटिक सर्जरीको सहारा लिन्छन्। कसैले भने प्रत्यारोपण विधि अपनाउँछन्। शरीर सुन्दर बनाउन प्रयोग गरिने विधिमध्ये एक हो– बोसो प्रत्यारोपण अर्थात् फ्याटग्राफ्ट।
चाउरीपना हटाउन, दाग हटाउन, स्तन सुन्दर बनाउन यो विधि अपनाइन्छ। नेपालमा बोसो प्रत्यारोपण भर्खरै सुरु गरिएको छ।
शरीरको कुनै पनि भागमा जम्मा भएको अधिक बोसोलाई निकालेर अर्को भागमा प्रत्यारोपण गर्ने प्रक्रियालाई नै फ्याटग्राफ्ट भनिन्छ।
बोसो प्रत्यारोपण ३ चरणमा गरिन्छ। सबैभन्दा पहिले शरीरमा अधिक वा अनावश्यक बोसो जम्मा हुने पेट, तिघ्राजस्ता अंगबाट बोसो निकालिन्छ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा उक्त बोसोलाई वैज्ञानिक प्रविधिबाट ध्यानपूर्वक शुद्धिकरण गरी मसिनो बनाइन्छ र सोही बोसो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने भागमा विना चिरफार स–साना सुईका माध्यमले राखिन्छ।
बोसो झिक्ने र राख्ने क्रममा ट्युमिसेन्ट एनेस्थेसियाको सहायता र नदुख्ने क्रिमको प्रयोगले यो प्रक्रियालाई पूर्ण रुपले दुखाईरहित बनाइन्छ। अनावश्यक बोसो झिक्ने र शारीरिक आवश्यकता भएको भागमा राख्नाले यस प्रविधिको दोहोरो फाइदा छ।
कस्तो अवस्थामा फ्याट ग्राफ्ट गर्न सकिन्छ ?
१. अनुहारको चाउरीपना वा खुकुलोपना घटाएर जवान देखाउन र फेस लिफ्ट गर्न।
२. कुनै गहिरो खत वा जन्मजात दाग पुर्न।
३. स्तनको आकार र रुप बढाउन।
४. आँखामुनी गढेर धसिएको भागलाई भर्न।
५. उमेरले पातलो र सुकेको कन्चट र नाकबराबरको भाग भर्न।
६. स–साना रेखी र चाउरी हटाउन र फिलरको रुपमा प्रयोग गर्न।
अनुहारको फ्याट ग्राफ्टको भूमिका
छाला चाउरी पर्नुमा विभिन्न आन्तरिक परिवर्तन र छुट्टाछुट्टै र अहम्भूमिका हुन्छ । छालाको पहिलो दुई पत्र उमेरसंगै पातलो हुने हुँदा चाउरी देखिन्छ। तर छालाको तेस्रो पत्र वा बोसोको तह छाला र अनुहार पोटिलो र कसिलो देखिनुमा धेरै महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा भने केही दशकयता मात्र प्रकाशमा आएको हो।
अनुहारमा बोसोको छुट्टाछुट्टै खण्ड वा डिब्बाहरु हुन्छन्,जुन समयसंगै आ–आफ्ना हिसाबले लत्रिँदै र झोलिँदै जान्छन्। त्यसले गर्दा आँखा तल्तिर गड्ने वा ब्याग बन्ने, चिउँडोमुनी मासु झोलिने गर्छ भने अन्य भाग पातलो देखिन्छ।
यसैले अनुहार र शरीरको वैज्ञानिक संरचनाको पूर्ण ज्ञान भएका चिकित्सकबाट पूर्ण शल्यक्रिया गराउनु जरुरी हुन्छ। यसरी चाहिने भागमा फ्याट राख्दा यसले फिलरको काम गर्छ र अनुहारलाई युवावस्थामा फर्काउँछ।
आजकाल केमिकल फिलरहरु पनि उपलब्ध छन्। जसमा बोसो झिक्नुपर्दैन। न्यून रुपमा सुईको प्रयोगले अनुहारमा आवश्यकताअनुसार केमिकल फिलरको प्रयोग हुन्छ। तर यी फिलर महंगो हुने र एलर्जी गराउन सक्ने खतरा हुन्छ। बोसोचाहिँ आफ्नो शरीरको उपज हुने हुनाले यो महंगो हुँदैंन र एलर्जी पनि निश्चित रुपमा हुँदैंन।
स्तनमा राखिने सिलिकन इम्प्लान्टहरुले लामो अन्तरालमा क्यान्सर हुने डर हुन्छ। बोसो प्रत्यारोपणले भने स्तनलाई कुनै खतरा छैन।
शल्यक्रियामध्ये साधारण शल्यक्रिया वा माइनर सर्जरीमा पर्ने यस प्रविधिमा बिरामी भर्ना हुनुपर्दैन। शल्यक्रियापश्चात यसमा खत बस्ने या दुखाईको डर खासै हुँदैंन। बिरामीहरु शल्यक्रिया भएकै दिन आफंै हिडेर घर जान सक्नुहुन्छ र भोलिदेखि दुखाई घटाउने औषधि लिने आवश्यकता पनि पर्दैन।
यसैले नचाहेको बोसो घटाई चाहिने ठाउँमा राखिने दोहोरो फाइदाभएको बोसो प्रत्यारोपण प्रविधि आधुनिक वैज्ञानिक युगले विकास गरेको एक नौलो देन हो।
(छाला रोग विशेषज्ञ डा श्रेष्ठ धुलिखेल अस्पतालमा कार्यरत छिन्।)